Gabar la dhalatay xildhibaan BFS oo lagu dilay Austria | KEYDMEDIA ONLINE
Gabar la dhalatay xildhibaan BFS oo lagu dilay Austria
Shukri Axmed Abtidoon iyo Faaduma Maxamed Xirsi oo da’dooda lagu sheegay 28 sanno jir iyo 37 jir, ayaa dilkooda waxaa lagu eedeynayaa wiil Soomaali ah oo mid ka mid ah gabdhaha la’ ahaa sheeko wadaag.
VIENNA, Austria - Meydka labo gabdhood oo Soomaali ah ayaa laga helay xalay fiidkii magaalada Vienna ee dalka Austria, gaar ahaan deegaan ay Soomaalidu ku badan tahay.
Falka dilka ah kaddib waxaa goobta gaaray ciidamada Booliska Austria, iyaga oo xiray wiilka Soomaaliga ah ee lagu tuhmayo inuu dilka fuliyay.
Booliska oo dhacdadan murugada leh baaritaan ku sameeyay, ayaa tilmaamay in dilka gabdhaha loo adeegsaday mindi ama tooreey. Waxaa kale oo la xusay in wiilka lagu tuhmayo falkan in uu ku kacay uu isticmalay maandooriyaha Khamriga.
Ehellada Gabdhaha la dilay ayaa Booliska ka dalbaday in baaritaan lagu sameeyo dilka lagula kacay gabdhahooda oo si deg deg ah maxkamad lagu horgeeyo cid kasta oo lagu helo filkan foosha xun eee lagu qaarijiyay gabdhaha.
Mid ka mid ah gabdhan la dilay oo la yiraahdo Shukri Axmed Abtidoon, waxa ay la dhalatay xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon oo ka mid ah xubnaha Baarlamaanka Soomaaliya ee xiligoodu dhammaaday.
Dhowr jeer oo hore ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay muwaadiniin Soomaali ah dalka Austria, waxaana dilalkaas intooda badan isu geystay Soomaalida dhexdooda.